Uwe nhicha / bathrobes clothing Uwe nkwalite • ọkachamara P&M kọmputa ịcha mma
Akwa nhicha ahụ na ebe ịsa ahụ mgbasa ozi bụ ezigbo usoro mgbasa ozi. Ikike ziri ezi textiles, akara ngosi na-adịgide adịgide ma mara mma nwere ike ịbụ ngosipụta zuru oke nke ụlọ ọrụ ahụ. A na-ahụkarị ha na họtel, ebe ntụrụndụ, SPA, ụlọ ndị ọbịa na ọtụtụ ebe ndị ọzọ, ha na-ebuli ugwu nke ụlọ ọrụ ahụ.
Akwa-akwa textiles na marking ga-egbo mkpa nke ọbụna ndị ahịa kachasị achọ. N'otu oge ahụ, ha ga-apụta site na asọmpi ahụ na-enwewanye ogologo oge ma belata mbibi na mbibi.
Obi ụtọ na-emetụ ihe
Ihe eji eme akwa nhicha ahụ na akwa ahụ bụ nke dị nro na-adị nro ma dịkwa nro ọbụna maka akpụkpọ anụ. N'ihi nkasi obi ha nyere ndị ọrụ ya, ha na-emetụta echiche ụlọ ọrụ ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Tụkwasị na nke a, ọ bụrụ na a na-ahapụ ndị ọbịa ka ha zụta ụdị uwe nhicha ahụ na akara akara, ohere nke nloghachi nke ndị ahịa na-abawanye n'ihi njigide ya na ebe nchekwa akara mgbe ị na-eji akwa ma ọ bụ akwa ndị ọzọ. A na-enwe mmasị na ngwa ndị dị otú ahụ bara uru, ma n'aka nke ọzọ, ha na-ewulite ọnọdụ nke ahịa na ahịa.
Ọ bara uru ị attentiona ntị na akwa nhicha nke ihe eji eme ngwa ngwa, nke na-ebelata ohere nke mmiri, ma si otú a - isi na-adịghị mma. A na-emegharị akwa na ụlọ ahịa anyị iji mee ihe ugboro ugboro na ịsa ahụ na nnukwu okpomọkụ.
Ihe ngosi bara uru ma di ire nke ulo oru
Akara aka na họtel na nke gastronomic textiles na-adọrọ mmasị nke ukwuu, si otú a na-adọta anya gburugburu. Nke a bụ ohere pụrụ iche maka ndị na-atụ anya onyonyo na-adọrọ adọrọ. Anyị nwere ogige igwe nke anyị ejiri naanị ngwaọrụ dị elu.
N'inwe ohere ndị a n'aka anyị, anyị nwere ike nweta mmetụta na-egosi akara nwere izu oke pụrụ iche na nkọwa niile. Anyị na-enye ụzọ dị iche iche akara, ma e wezụga na-atụ aro ya karịsịa ihe mkpuchi kọmputa maka thicker akwa, anyị na-eme na ihuenyo ebi akwụkwọ na sublimation.
Towel z Ihe mkpuchi ọ bụkwa ezigbo onyinye onyinye. Dị onyinye a mara mma, mara mma, mana nke bara uru ga-amasị ndị nnata ọ bụla. Ejiri ụkpụrụ mbụ chọọ ya mma, akara ngosi ahụ ga-ahapụ ebe nchekwa dị mma ruo ogologo oge.
Onye ọ bụla na-eji akwa nhicha ahụ, ha dị mkpa na ndụ kwa ụbọchị, yabụ onye natara ha ga-eji ha. Ọ bụ nnukwu ihe ijuanya, agbanyeghị oge ma ọ bụ oge, ọ nwere ike ịbụ onyinye maka ndị ikwu, ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ ngo.
Companylọ ọrụ ọ bụla nwekwara ike iji akwa nhicha ahụ akpọrọ dị ka ihe nrite na asọmpi na mgbasa ozi mmekọrịta - ọ bụ otu n'ime ụdị mgbasa ozi kachasị dị irè ma na-akwụ ụgwọ.
Ihe mkpuchi komputa na textiles
akwụkwọ akụkọ ahọpụtara e biri ebiakwa nhicha ahụ nwatampempe akwụkwọ ụlọ ọrụ nwere mbipụtaakwa a na-eji icha akwụkwọnhicha ụlọ nkwari akụ na-ebi akwụkwọnhicha ahụ nke ịsa ahụ nwaakwụkwọ ịsa ahụ e biri ebiEjiri di na nwunye na-ebi akwụkwọ nhichaịsa ahụ ịsa ahụ nwere akwụkwọ gịnhicha na arịrịọakwụkwọ eji ebi akwụkwọAkwụkwọ nhicha osimiri e biri ebiAkwụkwọ nhicha mmiri nke osimiri nwere akwụkwọ gịnhicha akwụkwọ nkwado iji bipụta yaAkwụkwọ nhicha ahụ eji ebipụta yaMpempe akwụkwọ microfiber nwere mbipụtaakwụkwọ eji ebi akwụkwọakwa nhicha ahụ na akwụkwọ mbipụta akwụkwọ akụkọ ahụakwa nhicha ahụ nwere mbipụta dijitalụnhicha ukwu nwere aha ndi edeputaranhicha ahụ na mbipụta Krakowakwa na nne na papanhicha ahụ tinyere di na nwunyeakwa nhicha mkpụrụ akwụkwọ na-ebi akwụkwọ onyinyeakwa nhicha ahụ eji ebi akwụkwọ maka agbamakwụkwọ ahụeji akwukwoakwa nhicha ahụ na poznań ebipụtaakwa nhicha ahụ nwere mbipụta Rybniknhicha ahụ na mbipụta Warsawnhicha nke eji ebi akwụkwọ Wroclawakwa nhicha ahụ jiri mbipụta gịuwe nwokebreeki na-ebi akwụkwọakwụkwọ ịsa ahụ na-ebi akwụkwọ Warsaw